Lonakele usuku lwamanye amalungu esiShayamthetho eKZN engaholi | isiZulu
Lonakele usuku lwamanye amalungu esiShayamthetho eKZN engaholi
Usethole ukugxekwa uRamaphosa ‘ngamaholo ezigqila’
Usuphinde wanyuswa umholo wesikhulu se-SABC, uMotsoeneng
‘Ubanjwe ngeholo’ umdlali obesabisa ngokushiya iqembu
Durban - Abe nosuku olumuncu amalungu esiShayamthetho saKwaZulu-Natal izolo ngoLwesithathu ngenxa yokungaholi ngosuku obekumele ahole ngalo.
Amalungu angu-38 kwangu-80 esishayamthetho nezisebenzi nje zesishayamthetho ezingu-15 athi ukungaholi kwawo kumoshe izinto eziningi njengoba esuke enezinhlelo afuna ukuzifeza ngemali.
Ngokusho kwelungu lephalamende elipotshozele leli phandandaba ILANGA, lolu daba, kunama-debit obekumele abambe imali yawo kodwa afike angayithola kuma-akhawunti.
Lokhu uthi kubenza babe ngabantu ababi kulabo ababakweletayo njengoba sebezobazi njengabantu abangazihloniphi izivumelwano yize besesishayamthetho.
OLUNYE UDABA:UMugabe udalule umholo wakhe
Uthi isizathu abasinikwe nguSomlomo wesiShayamthetho, uNkk Lydia Johnson mayelana nokungaholelwa ukuthi kube nenkinga kumakhompyutha, ebakhahlela.
"Kusixakile ukuthi la makhompyutha asikhahlela kanjani njengoba kade saqala ukuholelwa ngawo. Besifuna ukwazi ukuthi aze asikhahlele nje enziwe ngubani ukuthi enze lokhu ngoba phela nawo asethwa ngumuntu. Yize besithembisile ukuthi sizoholelwa namhlanje ngoLwesine kodwa nje kusilimazile ukungaholi izolo," kusho lo mthombo.
Umholi wekhokhasi yeNkatha Freedom Party (IFP), uMnu Blessed Gwala, uthe ukungaholi ngesikhathi okufanele kuholwe ngaso kuyinkinga kunoma ngubani.
"Kusuke kunezikweletu nemishwalense okusuke kufanele ikhokhelwe, okukwenza ube nechashazi lokungathembeki uma ungakhokhi ngesikhathi.
"Eminye yale mishwalense uma ungayikhokhele iyavalwa kodwa usomlomo wesishayamthetho uxolisile ngalesi simo kodwa kufanele kuphenywe ukuthi kwenziwe yini.
"Amalunga ePhalamende acelile kusomlomo ukuba abhale incwadi ezoyiswa kulaba esibakweletayo, eshoyo ukuthi kakubanga yiphutha lawo ukungakhokhi kodwa kube ngelakhe," kusho uMnu Gwala.
UMnu Francois Rogers weDemocratic Alliance (DA) uthi ibaphethe kabi indaba yokungaholelwa kwamanye amalungu kodwa amanye aholelwa. Uthi ngabe kungcono ukuba baziswe kusenesikhathi ukuthi kunenkinga abantu bangaboni sebesemabhange ukuthi umholo awungenile.
"Ukuxhumana kubalulekile ezimeni ezifuze lesi ngoba ngabe babatshelile nalabo ababakweletayo kusenesikhathi ukuthi bazobakhokhela nini bangaze bethi badonsa imali bafice kukhala ibhungezi," kusho uMnu Rogers.
Okhulumela isiShayamthetho saKwaZulu-Natal, uMnu Wonder Hlongwa, uthe amalunga esiShayamthetho ahola nyanga zonke ngomhlaka-15 kodwa kule nyanga babenenkinga emakhompyutheni abo njengoba eveze amanye amalungu njengabantu abahola ngomhlaka-16.
"Bazoyithola namhlanje imali yabo. Siyaxolisa ngobuhixihixi obenzekile," kusho uMnu Hlongwa.